बोनस शेयर, नगद लाभांश र अन्तरिम लाभांश दिन लागेको माछापुच्छ्रे बैंक : कम्पनी विश्लेषण
माछापुच्छ्रे बैंकले यो वर्ष शेयर धनीहरुलाई बोनस शेयर, नगद लाभांश र अन्तरिम लाभांश दिने भएको छ । उक्त कम्पनीले ७ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ३७ प्रतिशत करसहित नगद लाभांश दिने प्रस्ताव कात्तिक ६ गते २२ औं वार्षिक साधारण सभा गरी पारित गर्ने योजना बनाएको थियो ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले साधारण सभा स्थगित गरेको उक्त कम्पनीले २ दशमलव ८५ प्रतिशत अन्तरिम लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्नपीको असोज ३० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी साधारण सभामा अनुमोदन गराउने गरी अन्तरिम लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ७७ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू.१ अर्ब २५ करोड २० लाख ४२ हजार नाफा कमाएको थियो । असोज ६ गते बिहीवार उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू.२२९ कायम भएको छ ।
कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्याङगिङ म्यान आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ४७द शमलव २२ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव ५६ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखाले १४ दिने औसत मूल्य रेखालाई तलबाट काटेर माथि लागेको छ । हालको मूल्य रेखा यी दुवै मूल्य रेखा भन्दा तल छ ।
गत बिहीवारको शेयरमूल्य रू. २२९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भईमूल्य सस्तिएमा रू. २२२ मा टेवा पाउने र मूल्य महँगिएमा रू. २३३ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।